Health & Safety Information for In-person School | Battle Creek Public Schools
Health & Safety Information for In-person School
As we plan forareturn to in-person learning for all students in early 2021, the health and safety of our community remains our top priority.
In-person instruction will begin on January 18, 2021 for grades pre-K–5 five days per week and on January 25, 2021 underahybrid model for grades 6–12.
Robust safety measures will be in place for all students in all grades, including:
Masks will be required for all students and staff at all times, unless actively eating or drinking.
Social distancing will be encouraged when possible.
Hand washing and sanitizing stations will be provided throughout the buildings.
Signage and staff management will help direct traffic flow in hallways and keep pickup and dropoff organized in order to reduce crowding.
Seating will be managed during class time, lunch and study hall to ensure social distance between students as much as possible. (For example, seats will be labeled to ensure seats are left open in between students at tables.)
Assemblies, field trips and other gatherings remain on hold.
All previous guidance regarding hand-washing, symptom monitoring, COVID-19 testing and quarantine remain in effect:
All students and staff should wash hands frequently. If soap and water are not available, students and staff should use alcohol-based hand sanitizer, which will be provided. Please review proper hand-washing techniques with your student before the first day of school. Specific protocols will be put into place for students to wash hands or use sanitizer:
Upon arrival to the building
When using the restroom
When visibly dirty
Before leaving each area of the building
After usingatissue or coughing into hands
Promoting Social Distancing When Possible
To help students maintain social distancing as much as possible:
Buses, classes and lunch periods will all utilize assigned seating
Seats will be marked during lunch and other uses of communal tables so students know where to sit to maximize social distancing
No use of student lockers to minimize time in hallways
PE classes will not require changing to reduce crowding in locker rooms
On-Campus Nurse & Care Room
Students who are sick with possible COVID-19 symptoms will go to the school’s Care Room, until they are able to go home or toahealthcare facility. The area will be well-ventilated, allow for social distancing and be disinfected after each use.
Symptomatic students sent home from school will be kept home until they have tested negative or are cleared to return byadoctor or the County Health Department.
Staff and students will conduct daily self-examinations, includingatemperature check, prior to coming to work/school. Anyone experiencing any of the symptoms listed below is not to attend school or school events. Your student should stay home if they have any of the following symptoms:
A temperature of 100.4 degrees or higher
New uncontrolled cough that causes difficulty breathing (for students with chronic allergies or asthma,acough that is new or worse than usual)
And if your child has had close contact withaconfirmed COVID-19 case, or recently traveled to another area of higher risk, please contactahealthcare provider and keep your child home until they say it is okay to return — please provide written notice fromadoctor or the health department prior to returning to school.
Quarantine, Testing & Recovery
We will follow guidance from the Calhoun County Public Health Department (CCPHD) in the event ofasymptomatic student or staff member orapositive test result:
Ifastudent or staff member test positive, they must remain in isolation for 10 days since symptoms first appeared and 24 hours with no fever (without the use of fever-reducing medications) and no other symptoms. Isolation means thataCOVID-positive person should isolate themselves within their homes and from other members of the household who have not tested positive. If your child tests positive for COVID-19, please alert the school immediately.
Ifamember of your family/household tests positive, your child must remain home and away from school for the full course of the COVID-positive household member’s 10-day isolation period AND an additional 14 days from the end of the isolation period. Your child must remain home for this time period even if they do not develop symptoms and even if they do not test positive for COVID-19. If an additional member of your household falls ill during this time, the isolation and quarantine periods start over.
Ifa“close contact” of your child tests positive, your child must quarantine for 14 days from the date of the last close contact. Ifastaff member or student that your child has been in close contact with tests positive, you will be informed immediately and should begin quarantining at that time. (Close contact withaconfirmed COVID-19 case is defined as being within six feet ofaperson who has tested positive for at least 15 minutes with or withoutamask.)
Ifafamily member or close contact of your child develops symptoms, your child must quarantine away from school until the family member/contact receives test results. If test results are negative, your child can return to school.
If your child is identified as having come in close contact with anyone who tests positive, you will be notified directly and instructed to quarantine/advised to seek testing. If you do not hear from us or from the health department, this means that no action is needed. We are moving forward under the guidance of the Calhoun County Public Health Department and taking all appropriate measures to protect the wellbeing of our students. At this stage, school will remain open for in-person instruction and we will continue applying diligent health and safety measures.
Please continue to conduct daily symptom screening for your child. If your student is exhibiting any potential symptoms of COVID-19, they should remain home and you should contactahealthcare provider. If your child tests positive for COVID-19, please alert the school immediately.
Thank you for your help with keeping our community safe and sound!
Información sobre Salud y Seguridad para la Escuela Presencial
Mientras planeamos el regreso al aprendizaje en persona para todos los estudiantesaprincipios de 2021, la salud y la seguridad de nuestra comunidad sigue siendo nuestra principal prioridad.
La instrucción en persona comenzará el 18 de enero de 2021 para los grados pre-K-5 cinco díasala semana y el 25 de enero de 2021 bajo un modelo híbrido para los grados 6-12.
Se establecerán medidas de seguridad sólidas para todos los estudiantes de todos los grados, incluyendo:
Se requerirán tapabocas para todos los estudiantes y el personal en todo momento,amenos que coman o beban activamente.
Se fomentará el distanciamiento social cuando sea posible.
Se proveerán estaciones de lavado y desinfección de manos en todos los edificios.
La señalización y la gestión del personal ayudaránadirigir el flujo de tráfico en los pasillos yamantener la recogida y la entrega organizada para reducir el hacinamiento.
Los asientos se acomodarán durante el horario de clases, el almuerzo y la sala de estudio para asegurar la distancia social entre los estudiantes tanto como sea posible. (Por ejemplo, los asientos estarán etiquetados para asegurar que se dejen abiertos entre los estudiantes en las mesas).
Las asambleas, excursiones y otras reuniones permanecen en espera.
Todas las guías anteriores relativas al lavado de manos, la vigilancia de los síntomas, las pruebas de COVID-19 y la cuarentena siguen en vigor:
Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia. Si no se dispone de agua y jabón, los estudiantes y el personal deben utilizar un desinfectante de manosabase de alcohol, que se proporcionará. Por favor, revisen las técnicas adecuadas para lavarse las manos con su estudiante antes del primer día de clases. Se establecerán protocolos específicos para que los estudiantes se laven las manos o utilicen el desinfectante:
Al llegar al edificio
Al usar el baño
Antes de cualquier comida
Cuando está visiblemente sucio
Antes de salir de cada área del edificio
Después de usar un pañuelo de papel o de toser en las manos
Promover el distanciamiento social cuando sea posible
Para ayudaralos estudiantesamantener el distanciamiento social tanto como sea posible:
En los autobuses, en las clases y los períodos de almuerzo utilizarán los asientos asignados.
Los asientos se marcarán durante el almuerzo y otros usos de las mesas comunales para que los estudiantes sepan donde sentarse para maximizar el distanciamiento social.
Los estudiantes No usarán sus casilleros para minimizar el tiempo en los pasillos.
Las clases de Educación Física no requerirán cambiarse para reducir el hacinamiento en los vestuarios.
Enfermería y sala de cuidados en el campus
Todos los edificios tendrán una Sala de atención médica designada para los estudiantes que esperan ser examinados por la enfermera de la escuela. Los estudiantes que estén enfermos con posibles síntomas de COVID-19 iránala Sala de atención médica de la escuela, hasta que puedan volveracasa oaun centro de salud. El área estará bien ventilada, permitirá el distanciamiento social y será desinfectada después de cada uso.
Los estudiantes sintomáticos enviadosacasa desde la escuela se quedarán en casa hasta que den negativo o hasta que un médico o el Departamento de Salud del Condado les autoricen volver.
El personal y los estudiantes se harán autoexámenes diarios, incluyendo un control de temperatura, antes de venir al trabajo/escuela. Toda persona que experimente cualquiera de los síntomas que se enumeranacontinuación no debe asistirala escuela oalos eventos escolares. Su estudiante debe quedarse en casa si tiene cualquiera de los siguientes síntomas:
Una temperatura de 100.4 grados o más
Nueva tos no controlada que causa dificultad para respirar (para estudiantes con alergias crónicas o asma, una tos nueva o peor que la habitual)
Diarrea, vómitos o dolor abdominal
Nueva aparición de un fuerte dolor de cabeza, especialmente con fiebre
Y si su hijo ha tenido contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19, o ha viajado recientementeaotra área de mayor riesgo, por favor contacteaun proveedor de atención médica y mantengaasu hijo en casa hasta que le digan que está bien que regrese.
Cuarentena, Pruebas y Recuperación
Seguiremos la guía del Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD) en caso de que un estudiante o un miembro del personal sintomático tengan un resultado positivo de la prueba:
Si el resultado de la prueba de un estudiante o miembro del personal es positivo, debe permanecer en aislamiento durante 10 días desde la aparición de los síntomas y 24 horas sin fiebre (sin el uso de medicamentos antifebriles) y sin otros síntomas. Aislamiento significa que una persona que dé positivo en la prueba de COVID debe aislarse dentro de su casa y de los demás miembros de la casa que no hayan dado positivo. Si el resultado de su hijo es positivo para COVID-19, por favor, aviseala escuela inmediatamente.
Si un miembro de su familia/hogar da positivo, su hijo debe permanecer en casa y fuera de la escuela durante todo el período de aislamiento de 10 días del miembro de la familia que ha dado positivo en la prueba de COVID Y otros 14 días adicionalesapartir del final del período de aislamiento. Su hijo debe permanecer en casa durante este período de tiempo aunque no desarrolle síntomas y aunque no dé positivo en las pruebas de COVID-19. Si un miembro adicional de su hogar se enferma durante este tiempo, los períodos de aislamiento y cuarentena comienzan de nuevo.
Si un "contacto cercano" de su hijo da positivo, su hijo debe permanecer en cuarentena durante 14 díasapartir de la fecha del último contacto cercano. Si un miembro del personal o un estudiante con el que su hijo ha estado en contacto cercano ha dado positivoalas pruebas, se le informará inmediatamente y debe comenzar la cuarentena en ese momento. (El contacto cercano con un caso confirmado de COVID-19 se define como estaramenos de seis pies de una persona que ha dado positivo por lo menos 15 minutos con o sin una máscara).
Si un miembro de la familia o un contacto cercano de su hijo/a desarrolla síntomas, su hijo/a debe permanecer en cuarentena fuera de la escuela hasta que el miembro de la familia/contacto reciba los resultados de las pruebas. Si los resultados de la prueba son negativos, su hijo puede volverala escuela.
Si se identifica que su hijo ha estado en contacto cercano con alguien que da positivo, se le notificará directamente y se le indicará que se ponga en cuarentena, se le aconsejará que se haga las pruebas. Si no tiene noticias nuestras o del departamento de salud, significa que no es necesario tomar ninguna medida. Estamos avanzando bajo la guía del Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun y tomando todas las medidas apropiadas para proteger el bienestar de nuestros estudiantes. En esta etapa, la escuela permanecerá abierta para la instrucción en persona y continuaremos aplicando medidas diligentes de salud y seguridad.
Por favor, continúe realizando la evaluación diaria de los síntomas de su hijo. Si su estudiante muestra algún síntoma potencial de COVID-19, debe permanecer en casa y usted debe contactaraun proveedor de atención médica. Si su hijo da positivo en la prueba de COVID-19, por favor, aviseala escuela inmediatamente.
Gracias por su ayuda para mantener nuestra comunidad sana y salva!
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကျောင်းသားများအားလုံးအတွက် လူကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူရန် ပြန်လည် စီစဉ်ထားသောကြောင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက ဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်။ ဇန္နဝါရီလ ၁၈၊ ၂၀၂၁ တွင် သူငယ်တန်း-၅ တန်းကျောင်းသားများကို ရက်သတ္တပတ်တွင် ငါးရက် လူကိုယ်တိုင် ကျောင်းတက် သည့်သင်ကြားခြင်း နှင့် ၆-၁၂ တန်းကျောင်းသားများအတွက် ဇန္နဝါရီလ ၂၅၊ ၂၀၂၁ မှစတင်၍ hybrid ဟုခေါ်သော အွန်လိုင်း နှင့် လူကိုယ်တိုင်တက်‌ရောက်သင်ကြားသည့် စနစ်များဖြင့် အသီးသီး စတင်ကြမှာဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသားများအားလုံးအတွက် ခိုင်မာသည့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများမှာ-
မျက်နှာဖုံး (Masks) ကိုစားချိန် သို့မဟုတ် ရေသောက်ချိန် စသည်တို့မှအပ အချိန်ပြည့် ဝတ်ဆင်ထားရပ်မည်။
လိုအပ်သောအခါ လူမှုရေးအကွာအဝေး (Social distancing) ပြုလုပ်ရန် အားပေးတိုက်တွန်းရပါမည်။
စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံအားလုံးတွင် လက်ဆေးရည် နှင့် သန့်စင်ရည်ထားရာနေရာ (sanitizing stations) စသည့်တို့ကို ပံ့ပိုးထားပါမည်။
ဆိုင်းဘုတ်များနှင့် ၀န်ထမ်းများစီမံခန့်ခွဲမှု ကစင်္ကြံများသို့တိုက်ရိုက်အသွားအလာ ကူညီပေးပြီး လူအုပ်ထူထပ်မှုကို လျှော့ချရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်း၊
ကျောင်းသားများအကြား လူမှုရေးအကွာအဝေးကို တတ်နိုင်သမျှအတန်းချိန်တွင်ထားရန်၊ နေ့လည်စာနှင့် လေ့လာမှုခန်းမများတွင် ထိုင်ခုံများကို စီမံပါလိမ့်မည်။ (ဥပမာ - ထိုင်ခုံများကို ကျောင်းသားများကြားတွင် သေချာစေရန် ထိုင်ခုံများကို အမှတ်တံဆိပ်တပ်ရမည်။ )
စည်းဝေးပွဲများ၊ လေ့လာရေးခရီးစဉ်များနှင့် အခြားစုရုံးမှုများ အားလုံး ဆိုင်းငံ့ထားသည်။
လက်ဆေးခြင်း၊ လက္ခဏာများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ COVID-19 စစ်ဆေးခြင်းနှင့် quarantine နှင့်ပတ်သက်သော အကြောင်းအ ရာအားလုံးသည် ယခင်လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
မကြာခဏ လက်ကိုဆေးပေးပါ (Wash Hands Frequently)
ကျောင်းသား နှင့် ဝန်ထမ်း အားလုံး မိမိတို့၏ လက်များကို မကြာခဏ ဆေးကြောပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဆပ်ပြာ နှင့် ရေ အသုံးပြုရန်အဆင်မပြေပါက အရက်ပျံကို အခြေခံပြီးပြုလုပ်ထားသော သန့်စင်ရည် (sanitizer) ကိုအသုံးပြုပေးပါ။ ၎င်းတို့ကို ပံ့ပိုးထားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာတွင် သင့်ကလေးကျောင်း မစတင်မှီ သင့်တော်သော လက်ဆေးသည့် နည်းပညာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးစေလိုပါသည်။ ကျောင်းသားများကို လက်ဆေးခြင်း (သို့) သန့်စင်ဆေးရည်သုံးရန်အတွက် အသေးစိတ် တိကျသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သတ်မှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့် အစာ မစားမှီ၊
အဆောက်အအုံရှိ ဧရိယာတစ်ခုချင်းမှ ထွက်ခွာသောအခါ၊
လက်ဖြင့် တစ်သျှူး သို့မဟုတ် ချောင်းဆိုးပြီးသောအခါ၊
လိုအပ်သောအခါ လူမှုရေးအကွာအဝေး ပြုလုပ်ရန်မြှင့်တင်ပေးခြင်း (Promoting Social Distancing When Possible)
ကျောင်းသားများအနေဖြင့်လူမှုရေးအကွာအဝေး/ခပ်ခွာခွာနေခြင်း(social distancing) ကိုတတ်နိုင်သမျှ ဆက်လက်ထိန်း သိမ်းရန်။
ဘတ်စ်ကားစီးချိန်၊ အတန်းများနှင့် နေ့လည်စာစားချိန်များတွင် သတ်မှတ်ထားသောထိုင်ခုံကိုသာ အသုံးပြု ရမှာဖြစ်သည်။
လူမှုရေးအကွာအဝေးကို တိုးမြှင့်ရန် ဘယ်နေရာမှာထိုင်ရမယ်ဆိုတာ ကျောင်းသားများသိအောင် နေ့လည်စာစားချိန် နှင့် အခြားအများသုံးစားပွဲများတွင် ထိုင်ခုံများကို မှတ်သားထားပါမည်။
စင်္ကြံတွေမှာအချိန်နည်းအောင် ကျောင်းသားများ၏ ပစ္စည်းထားသောဗီဒို (lockers) ကိုအသုံး မပြုပါ။
PE အတန်းများသည် အ၀တ်ခန်းများအတွင်းလူအစုအဝေးအားလူအစုအဝေးလျှော့ချရန်ပြောင်းလဲရန်မလိုအပ်ပါ။
စာသင်ကျောင်းအတွင်း သူနာပြု နှင့် ပြုစုစောင့်ရှောက်သောအခန်း (On-Campus Nurse & Care Room)
စာသင်ကျောင်းတိုင်းတွင် ကျောင်းသူနာပြုများက စစ်ဆေးရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောကျောင်းသားများအတွက် အဆောက်အဦး အားလုံးတွင် သတ်မှတ်ထားသော စောင့်ရှောက်မှုအခန်းရှိပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သော COVID-19 လက္ခဏာများနှင့် ဖျားနာနေသော ကျောင်းသားများသည် အိမ်သို့ (သို့မဟုတ်) ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနသို့ မရောက်မှီအထိ၊ ကျောင်း၏စောင့်ရှောက်ရေး အခန်း သို့သွားရပါမည်။ ထိုနေရာသည် လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး၊ လူမှုရေးအရဝေးကွာ နှင့် အသုံးပြုမှုတစ်ခုစီတိုင်းကို ပိုးသန့်ဆေးရည်များဖြင့် သန့်စင်ပါမည်။
ကျောင်းမှအိမ်သို့ပို့သည့် ရောဂါလက္ခဏရှိသောကျောင်းသားများကို ဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) County ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာနမှ ပြန်လာရန် ခွင့်ပြုချက် မပေးမခြင်း ၎င်းတို့အားအိမ်တွင်ထားရှိရမည်။
အကယ်၍ နေမကောင်းဖြစ်ပါက အိမ်တွင်နေပါ (Stay Home if Sick)
၀န်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသားများသည် ကျောင်းသို့မသွားမှီ အပူချိန်စစ်ဆေးခြင်း အပါအ၀င် နေ့စဉ် မိမိကိုယ်ကို စစ်ဆေးမှု များပြုလုပ်ရမည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုကို ခံစားနေရသူ မည်သူမဆိုကျောင်း (သို့မဟုတ်) ကျောင်း၏ အစည်းအဝေးများတွင် မတက်ရောက်ရပါ။ အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများရှိလျှင် သင်၏ ကလေးသည် အိမ်တွင်နေသင့် သည်။
ကိုယ်ပူချိန် ၁၀၀.၄ ဒီဂရီ သို့မဟုတ် ဒီ့ထက်မြင့်သောအခါ။
အသက်ရှူကျပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသော ထိန်းချုပ်မှုမရှိသည့် အသစ်သောချောင်းဆိုးခြင်း (နာတာရှည်ဓာတ်မတည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသည့်ကျောင်းသားများအတွက်၊ ပုံမှန်ထက်ပို၍ အသစ် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးသောချောင်းဆိုးခြင်း။)
ဝမ်းသွားခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း။
အကယ်၍ သင့်ကလေးသည် အတည်ပြုပြီးသော COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှင့် နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့လျှင် (သို့မဟုတ်) မကြာသေးမှီ ပိုမိုမြင့်မားသည့် အန္တရာယ်များသော အခြားဒေသသို့ခရီးထွက်ခဲ့ပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ဆက်သွယ်ပါ။ သင့်ကလေးအတွက် စာသင်ကျောင်းသို့ ပြန်လာနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးဇူးပြု၍ စာဖြင့် ဆရာဝန် (သို့မဟုတ်) ကျန်းမာရေးဌာန တို့၏ထောက်ခံစာ ယူလာပေးပါ။
ရောဂါမကူးစက်စေရန်ခွဲထားသည့်အချိန်၊ စစ်ဆေးခြင်း နှင့် ကျန်းမာပြီ (Quarantine, Testing & Recovery)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းသား (သို့မဟုတ်) ၀န်ထမ်းတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ရောဂါကူးစက်မှုအတည်ပြုသည့် စမ်းသပ်မှု ရလဒ်ရှိ ပါက၊ Calhoun County ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန (CCPHD) ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါသည်
အကယ်၍ ကျောင်းသား (သို့မဟုတ်) ၀န်ထမ်းတစ်ဦး သည် ရောဂါကူးစက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုမှုရပါက သူတို့သည် လက္ခဏာများကို ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာပြီး ၂၄ နာရီအဖျားမရှိ (အဖျားလျှော့ချဆေးများမပါဘဲ) နှင့် အခြားလက္ခဏာများ မရှိဘဲသီးခြားနေရန် ၁၀ ရက်ကြာနေရမည်။ သီးသန့်နေရခြင်း ဆိုသည်မှာ COVID-positive ဖြစ်သော လူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏နေအိမ်များအတွင်း ရောဂါစစ်ဆေးမှု မခံရသေးသော အခြားအိမ်ထောင်စုဝင်များ နှင့် သီးခြားနေသင့်သည်။ သင်၏ကလေးသည် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရမှု အတည်ပြုချက်ရှိပါက၊ စာသင်ကျောင်းကို ချက်ချင်းအကြောင်းကြားပေးပါ။
အကယ်၍ သင်၏မိသားစု/အိမ်ထောင်စုမှ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ရောဂါကူးစက်မှု အတည်ပြုချက်ရရှိပါက၊ သင့်ကလေးသည် COVID - ကူးစက်ခံရသောအိမ်ထောင်စုဝင်အတွက် သီးသန့်နေရန်သတ်မှတ်ထားသော ၁၀ ရက် နှင့် ထပ်ဆောင်း ၁၄ ရက် စသည့်ဖြင့် သင့်ကလေးသည် သီးသန့်နေထိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကလေးသည် ဤအချိန်တွင် ရောဂါလက္ခဏာများ မတွေ့ရခြင်း နှင့် COVID-19 ကူးစက်ခံရမှု မရှိသော်လည်း ဤအချိန်ကာလ အတွင်း အိမ်တွင်နေရပါမည်။ ဤအချိန်အတောအတွင်းသင်၏အိမ်ထောင်စုမှ ထပ်မံ၍ တစ်ဦးတစ်ယောက် ဖျားနာလျှင် သီးသန့်နေရသည့်ကာလများစတင်သည်။
အကယ်၍ သင့်ကလေး၏ ရောဂါကူးစက်ခံရသူနှင့် အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုရှိကြောင်း အတည်ပြုခံရပါက သင့်ကလေးသည် ထိုသူနှင့် နောက်ဆုံးအနီးကပ်ဆက်သွယ်သည့် နေ့မှစ၍ ၁၄ ရက်ကြာ သီးသန့်နေရပါမည်။ အကယ်၍ ရောဂါစစ်ဆေးမှူတွင် အတည်ပြုလူနာသည် ၀န်ထမ်းတစ်ဦး သို့မဟုတ် ကျောင်းသားတစ်ဦး ဖြစ်ပါကသင့်အားချက်ချင်းအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ (ရောဂါကူးစက်ခံရကြောင်းအတည်ပြုပြီးသော COVID-19 အမှုနှင့်အနီးကပ်ထိတွေ့မှုရှိသူဟုသတ်မှတ်ရာတွင် ရောဂါကူးစက်ခံရသူနှင့် ခြောက်ပေအကွာအဝေးအတွင်း မျက်နှာဖုံးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မပါ၀င်ဘဲဖြစ်စေ အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့် အတူရှိနေခဲ့ခြင်း) ကို သတ်မှတ်ပါသည်။
အကယ်၍ မိသားစု၀င်တစ်ဦး သို့မဟုတ် သင့်ကလေး၏အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုသည် ရောဂါလက္ခဏာပြလာလျှင်၊ မိသားစု၀င်/အဆက်အသွယ်မှစစ်ဆေးမှုရလဒ်များ မရရှိခင်အထိ သင့်ကလေးသည်ကျောင်းမှခွဲထားရမည်။ အကယ်၍ စစ်ဆေးမှုတွင် ရောဂါ မရှိကြောင်းအတည်ပြုပါက၊ သင့်ကလေးသည် ကျောင်းသို့ လာနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင့်ကလေးသည် ရောဂါကူးစက်ခံရသူနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိကြောင်းအတည်ပြုချက်ရှိပါက သင့်အားတိုက်ရိုက် အကြောင်းကြားပြီး စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရန်အတွက် သီးသန့်နေရန်/ အကြံပေးခြင်း ခံရပါ လိမ့် မည်။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် စာသင်ကျောင်းမှ၎င်း၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှ၎င်း မည်သည့် အကြောင်းကြားမှုမျိုး မရပါက၊ သင်မည်သည့် အရေးယူမှုမျှပြုလုပ်ရန် မလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Calhoun County ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာန၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သို့တိုးတက်နေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများ၏သာယာဝပြောမှုကိုကာကွယ်ရန်သင့်လျော်သောဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးကိုပြုလုပ်နေသည်။ ဤအဆင့်တွင် ကျောင်းသည် လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သည့် သင်ကြားမှုဖြင့် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် လုံ့လဝီရိယရှိသည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးမည်။
ကျေ’ဇူးပြု၍ သင့်ကလေး၌ ရောဂါလက္ခဏ ရှိမရှိ နေ့စဉ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပေးပါ။ အကယ်၍ သင့်ကလေးသည် COVID-19 လက္ခဏာများကိုပြသပါက အိမ်တွင်ရှိနေသင့်ပြီး၊ သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့် ဆက်သွယ်သင့်သည်။ သင်၏ ကလေးသည် COVID-19 ရောဂါကူးဆစ်ခံရမှုအတည်ပြုချက်ရှိပါက စာသင်ကျောင်းကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိုင်းအဝိုင်းကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာထားနိုင်ရန် ကူညီပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။